Ada: Microsoft Adcenter Labs na. NET | Martech Zone
Ndị mmadụ na-eche ihe kpatara na anaghị m anụ ụtọ mmemme na ASP.NET. Ọ bụ n'ihi na oge ọ bụla m mere, m na-enweta ụfọdụ peeji njehie dị ka nke a. Achọpụtara m ma ọ bụrụ na ndị ọma Microsoft enweghị ike ịzụlite ngwa nke aka ha n’emeghị ya, kedu ka m ga-esi aga ?! Site na Microsoft Adcenter Labs Demographics Amụma:
Tags: bill@tuitivegroup.comblog ebipụtaimirikitiwijetị facebookinye ekelewijetị twitter
WordPress: Ngwakọta Ngwakọta SMS
Sep 9, 2008 na 9: 22 AM
Aghọtaghị m… thats a standard error page. You nwere ike nweta ihe ọ bụla na ngwa (PHP, Ruby, Perl, wdg…) Ọ bụ n'ezie ihe nchebe n'ihi na n'adịghị PHP, na ndabara ASP.NET odịbe njehie ozi ya kpughere ụwa na ike gị na saịtị a lekwasịrị anya maka hackers.
Sep 9, 2008 na 9: 36 AM
Nwere ike ịnweta peeji njehie na ikpo okwu ọ bụla, n'ezie Sameer. Mkpesa m bụ na ọ bụ saịtị MICROSOFT nwere njehie MICROSOFT. Ha kwesiri imenye ha ihere na ha etinyela ngwa ahụ na njehie, nyere ha na ha bu ndi dere IIS na ASP.NET.
Sep 11, 2008 na 9: 43 AM
Aghọtara m ihe ị na-ekwu ugbu a. Are na-ekwu na ọ bụ ebe nrụọrụ Microsoft a ka ụta dịịrị.
Ọ dị mma isi okwu gị dị mma, ha kwesịrị ịhazi peeji njehie ha (nke bụ obere ọrụ) mana ịta ụta na .NET bụ ihe na-enweghị isi ikwu obere. Nke ahụ ga-adị ka sị “Enweghị m mmasị na mmemme na PHP n'ihi na PHP saịtị nwere ọkọlọtọ njehie peeji nke” 😛
Sep 11, 2008 na 11: 43 AM
M mere igwu na Microsoft, kwa, Sameer :). Echere m na peeji njehie na IIS gbasara ASP.NET dị oke egwu! Na asụsụ ndị ọzọ, gụnyere PHP, ọ bụrụ na njikwa njehie dị, ana m enweta nkọwa gbasara njehie ahụ. Ọ dị m ka mgbe m nwalere na ASP.NET ihe niile m nwetere bụ ihe a.
Sep 17, 2008 na 11: 30 AM
Ahh dịkwa mma ugbu a ka m ghọtara. Ma buru n'uche ya egwu site na imewe. Ha ma ụma zoo ezigbote ozi ezighi ezi. Nke a bụ n'ihi na ịchọghị ka ekpughere gị dịrị n'ụwa.
Otu ihe na ASP.NET, ị na-ahụ nseta ihuenyo nke ị nwere? Naanị tinye customErrors = gbanyụọ mgbe ahụ ọ ga - enye gị ozi ezighi ezi.
Infact enwere ọbụna plọg na kpọọ usoro ihe eji emehie ihe nwere ike ịkpọ gị Elmah nke m chere na ọ mara mma, atụụrụ m ya ka ọ jiri ya rụọ ọrụ yana ọ dị egwu. Na nke a ị nwere ike zoo ozi njehie site na ndị ọbịa na saịtị ahụ, mana ọ ga-abanye nke ọma ma ọ nwedịrị ike ịtọlite ​​iji zitere gị email oge ọ bụla ozi njehie ọhụụ pụtara. Na-ekwu maka ụtọ 😉
PS M na-amasị PHP kwa, ma mgbe iji .NET maka afọ 2 oge ọ na-eto m really